विशाल लाभहरू ... रहस्य अब प्रकट भयो! | Martech Zone
बिहीबार, अप्रिल 23, 2009 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
होईन, मेरो साइटलाई स्प्यामरले आक्रमण गरेन। यो अझै यो डग पोष्ट लेखिरहेको छ र म यो मेरो आफ्नो स्वतन्त्र इच्छा अन्तर्गत गर्दैछु।
के तपाईंले कहिल्यै वेब पृष्ठलाई हेट गर्नुभयो जुन उनीहरूले तपाईले समस्या समाधान गर्न खोज्नु भएको समस्याहरूको सबै गोप्य कुरा प्रकट गर्ने विज्ञापन गरिरहेका छन्? पृष्ठ केहि अविश्वसनीय रूपमा लिखित, सूत्र पाठको साथ सुरू हुन्छ जुन तपाईंलाई शोषण गर्दछ, बोल्ड छविहरू, सम्मोहक प्रशंसापत्रहरू… पृष्ठ खाली गर्दछ जब तपाईं जादुईबाट आफ्नो क्रेडिट कार्ड उठाउँदै हुनुहुन्छ।
जब म प्रत्यक्ष मेल व्यवसायमा काम गर्थें, मैले प्याट कोयल शिल्प देखे लामो प्रतिलिपि अक्षर जसले अविश्वसनीय प्रतिक्रिया दरहरू प्राप्त गर्‍यो। म साथी र कपीराइटरलाई विश्वास गर्दछु एरिक डेकर्स लामो प्रशंसक र लेखक पनि हो। वास्तविक उत्पादन जस्तोसुकै भए पनि, यी लेखकहरूको प्रतिभा अतुलनीय छ ... तपाईं अक्षरको अन्तमा प्रायः सम्मोहित हुनुहुन्छ।
केही बजारका लागि यसप्रकारको प्रतिलिपि लेखन घृणित हुन्छ र कहिलेकाँही तिनीहरू विश्वासघात गर्दछन्। म भन्न सक्दिन कि म सहमत छु। जब म यो देख्छु म सजिलै चिन्न सक्छु, तर कहिलेकाहिँ पछाडि फर्किनु गाह्रो हुन्छ। मैले आफ्नो समयमा केहि ईबुकको लागि डाउनलोड (र भुक्तान गरेको) गरेको छु - र म विश्वास गर्दछु कि मैले मेरो पैसाको मूल्य कमाइसकेको छु।
यी मान्छेहरु धेरै छन् सूचना बजारहरु, व्हीलीing्ग र ईबुक, वेबिनारहरू र सम्मेलनहरूमा काम गर्ने। तिनीहरू केही नि: शुल्क स्वादको साथ खोल्छन् जुन तपाईंलाई शोषण गर्दछ र तपाईंले आफ्नो सम्मेलन छोड्नु भएको बखत तपाईंको हजारौं डलर खर्च हुन सक्दछ।
लागत सापेक्षिक छ, यद्यपि ... यदि तपाईंलाई यी व्यक्तिहरूको प्रमोशनल प्रतिभा छ र तपाईं यसमा भएका सबै चीजहरू राख्न इच्छुक हुनुहुन्छ… तपाईं धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो ब्ल्ग र साइटहरूको पाठकलाई अवलोकन गर्दा, म जोएलको पाइलामा नपरेर र आफैंमा एक सूचना मार्केटर बन्न धेरै पैसा तिर्न सक्छु।
धेरै व्यक्तिहरू १ 1990 late ० को दशकको डट-कॉम क्रेजसँग इन्टरनेट मिलियनेयर हुन सम्बद्ध गर्छन् ... तर इन्टरनेट मार्केटिंग अग्रगामीहरूको सानो समूहले याहू'ड वा गूगलले “पैसा अनलाइन बनाउने” भन्ने शव्दको अघि चुपचाप अनलाइन भाग्य बनाउँदै थिए। तिनीहरू मध्ये धेरैले चार साधारण तर अत्यन्त शक्तिशाली शब्दहरू वरिपरि आफ्नो साम्राज्यहरू निर्माण गरे ... अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।
जोएल Comm's न्यू योर्क टाइम्स सर्वश्रेष्ठ विक्रेता, अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, छैन एक मार्केटिंग स्क्रिप्ट वा कसरी एक करोडपति बन्ने मा एक पुस्तक। यसको सट्टामा, यो इन्टरनेटको प्रारम्भिक इतिहास र त्यहाँ पहिलो पल्ट लाभदायकहरू मनमोहक दृश्य हो - जसमध्ये केही तपाईंले सुन्नुभएन। जस्तो मार्क जोयनर भन्छ, "यहाँ मानिसहरुको एउटा सानो समूह छ जसले प्राविधिक क्रान्तिको शुरुवातमा अवसर देख्यो र त्यसलाई समात्यो।"
त्यहाँ इन्टरनेट मार्केटरहरू र ईन्टरनेट मार्केटरहरू छन्। मलाई थाहा छ तिनीहरू उस्तै ध्वनि गर्दछन्, तर प्राय जसो एउटा समूहले अर्कोलाई निजी स्कूलको बच्चा जस्तो पनी पब्लिक स्कूलको कोही नक्कल लगाएर हेर्छ। यस अवस्थामा, जे होस्, यो प्राय जसो सार्वजनिक विद्यालयको बच्चा हो जित्छ ... अनौपचारिक तरिकामा ठूलो मुनाफा सार्न। यो लगभग माथि जस्तो देखिन्छ जस्तो कि यो माथि र माथि छैन ... तर सment्लग्नता सबै स्वैच्छिक हो र यो निकै ठूलो उद्योग हो।
म यी इन्टरनेट मार्केटरहरूलाई कुनै पनि हिसाबमा हेर्दिन। इतिहासलाई एक नजर हेरौं र, उदाहरण को लागी तुलना गर्नुहोस् कोरी रुडल (RIP) लाई Pets.com, यो स्पष्ट छ कि कोसँग रहन शक्ति र प्रतिभा थियो। यो पनि स्पष्ट छ कि कसले उनीहरूको पैसा खेर फाल्यो र उनीहरूको राजस्व खलबल्यायो। म यी उद्यमीहरूको बढ्दो अविश्वसनीय व्यवसायहरूमा प्रतिभाको प्रतिस्पर्धामा छु, एक अर्कालाई क्रस रूपान्तरण गर्ने (प्रतिस्पर्धाको सट्टा), एक अर्कोलाई के सिकाउँछ र सिकाउँदछ र निर्दोष रूपमा प्रत्येक उपकरणको उपयोग गरेर तिनीहरूको परीक्षणमा प्रतिलिपि बनाउँदछ र उत्पादन गर्दछ। त्यो रूपान्तरण।
म एक मार्केटि pur प्युरिस्ट हुँईन जसले यी उद्यमीहरूलाई ठट्टामा उडाउँछ, मलाई लाग्छ उनीहरूको तप र कथाहरू मनमोहक छ। जोएलको किताब भनेको केहि सब भन्दा सफल इन्टरनेट मार्केटरको कहानी पछि कहानी हो। केटाहरूको कथाहरू रातभरि आफ्नो शिल्पमा निपुणता राख्ने, काममा निदाएको, हावामा बग्ने र करोड़पति हुने कुनै पनि उद्यमीका लागि ठूलो प्रेरणा हो। कथाहरू पढ्दा तपाईंको रगत पम्पि! हुन्छ! औसत CMO वा मार्केटिंगका निर्देशकले यो समूहबाट धेरै सिक्न सक्दछन्।
मंगलवार राती मैले समाप्त गरे सुपर क्रौंचरहरू सैन फ्रान्सिस्कोको विमानमा र मैले सकें अर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् आज बिहान उडानमा - सबै २279 pages पृष्ठहरू। यो एक राम्रो पढाई हो - निश्चित गर्नुहोस् जब तपाईले एउटा मौका पाउनुहुन्छ।
मलाई मेरो निकट भविष्यमा ईबुक पनि लाग्छ!
टैग: पुस्तक समीक्षाअर्डर गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्जोएल कम
तपाईंको साइटमा .htaccess को साथ सजिलो यूआरएलहरू
अप्रिल 24, 2009 मा 10: 33 एएम
शानदार पोस्ट, डग! म ती पुस्तकहरू साँच्चै "तपाईलाई पम्प अप" भन्न सक्छु। र कुरा के हो, मलाई तपाईले उल्लेख गरिरहनु भएको प्रतिलिपिको प्रकारको ठ्याक्कै थाहा छ। प्रत्यक्ष मार्केटिङ विज्ञापन एजेन्सीमा हुर्कदै गर्दा म यसमा अर्ध-विद्यालय गएको थिएँ जहाँ मसँग मेरो अर्को प्रत्यक्ष मेल प्याकेजको लागि मेरो प्रेरणा पाउनको लागि, केही बूढो केटाको ठूलो कालो पुस्तकको साथमा नमूनाहरूको स्टक थियो। जो प्रत्यक्ष मार्केटिङको विषयमा गुरु हुनुपर्थ्यो। (म त्यतिबेला बच्चा थिएँ, भर्खरै जोन्सन बक्स र स्न्याप-प्याक्स जस्ता चीजहरू आविष्कार गर्ने DM लेजेन्डहरूको बारेमा सिक्दै थिए।) जे होस्, मलाई उपभोक्ता रिपोर्टहरूमा सदस्यताहरू बेच्ने 6-पृष्ठको पत्र लेख्न चुनौती दिइयो (यो "लामो अक्षर" थियो। अवधारणा)। मैले गरेको लेख्नुहोस्, तर ग्राहकले यसलाई कहिल्यै मेल गरेन। म अझै पनि मेरो शिल्प सिक्दै थिए, र यो पक्कै एक चुनौती थियो।
मलाई याद छ जब मैले पहिलो पटक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया पत्रहरू पढ्न थालेको थिएँ, मेरो हाईस्कूल र कलेज वर्षहरूमा मैले धेरै कुराहरू प्राप्त नगरेको (म विदेशी साथीहरू, साथीहरू र आफन्तहरूका लागि एक उत्सुक पत्र लेखक थिएँ), मलाई ती अक्षरहरू सुसमाचार सुनिन्छन्।
हो, एउटा ebook अद्भुत सुनिन्छ! त्यसको लागि जानुहोस्!
अप्रिल 24, 2009 मा 8: 28 PM
ईबुक सुरु भयो!